Mee WordPress Plugins Ọnụ ego? - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Mee WordPress Plugins Ọnụ ego?
WordPress bụ ọtụtụ eji n'elu ikpo okwu na platformntanetị fọrọ nke nta 41% nke ndị ọrụ na-ewuli weebụsaịtị ha na WordPress. Ọ bụ n'efu, emeghe-isi mmalite, ma nwee nnukwu mgbanwe. Can nwere ike ịgbatị na ị chọrọ usoro iji ọtụtụ nhọrọ ịhazi site na plugins.
WordPress plugins bụ free na njedebe atụmatụ. Ha na-efu gị ego iji wee nweta atụmatụ zuru oke. Paymentkwụ ụgwọ ahụ nwere ike ịbụ otu oge ma ọ bụ ugboro ugboro dabere na ọrụ ị na-enweta.
Ngwa mgbakwunye bụ ngalaba nke WordPress Platform. WordPress onwe ya free software na-enye gị ohere mepụta weebụsaịtị na blọọgụ ịchọrọ. Can nwere ike idezi, tinye ahịrị nke Koodu, nkwughachi, ree ma kesaa ka ọ bụ ngwanrọ na-enweghị isi na-emeghe n'okpuru ikikere ọhaneze. Ọ pụtara na enweghị mmachi ime ụdị ọrụ ahụ. Otú ọ dị, ndị ahịa na-akwụ onye nrụpụta ụgwọ maka itinye koodu na iji melite nhazi dị ka achọrọ.
WordPress plugins na-efu ego
Free na Freemium WordPress plugins
Na mgbakwunye na nke a, WordPress plugins bụkwa otu nke koodu nzuzo, na-eme dị ka ndọtị nke atụmatụ. Ana m atụ aro mgbe niile ka onye ahịa m kwụọ ụgwọ maka atụmatụ adịchaghị nke plugins iji bulie arụmọrụ ya. Abụghị onye nrụpụta koodu PHP, Ana m ewere enyemaka nke plugins mgbe niile.
Mgbe obula m wulite webusaiti nye onye ahia m, Ana m eche mgbe niile iwulite ebe nrụọrụ weebụ ahaziri nke ọma site na enyemaka nke plugins anaghị akwụ ụgwọ. Anaghị m anwa ịbawanye mmefu ha. Mgbe ụfọdụ, ikpe ahụ na-eme mgbe ụfọdụ ndị ahịa m chọrọ ọkaibe webusaiti ọkachamara. Ọchịchọ a na-ekwusi m ike ka m gaa maka njirimara.
N'otu aka ahụ, ọnwa ole na ole azụ m zụrụ “Elementor pro ngwa mgbakwunye“. Ihe mgbakwunye a bụ ụbọchị nwere nnukwu ewu ewu. uru nke ngwa mgbakwunye a bụ ịgbakwunye ahịrị koodu na akpaghị aka na azụ azụ. Na ngwa mgbakwunye a, tinye dọrọ na dobe atụmatụ nyere m ohere ịzụlite n'ime ụbọchị ole na ole. Nke a “Elementor pro” ngwa mgbakwunye akwụ m ụgwọ 1000 gbakwunye Dollar kwa afọ.
Ihe mgbakwunye Freemium dị ka ụtọ ice cream. You gaghị enweta scoop achọrọ. Mana ị nwere ike ịchọpụta otu ụdị ngwa mgbakwunye WordPress ahụ si arụ ọrụ, otu ọ ga - esi baara gị uru ma ọ bụrụ na ị gaa n'ihu n'ọrụ ha?
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, Onwe m emeghi gi ka ị gaa maka ngwa mgbakwunye di elu na ọkwa izizi. Kwesịrị ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na atụmatụ ndị dị mkpa kama iwulite ọkwa ọkachamara. Ka ị na-eto na azụmaahịa gị ịzụrụ ihe mgbakwunye adịcha adị ka mpempe achicha.
E wezụga nke a, m n'onwe m na-akwado ka ị ghara ibudata adịchaghị plugins unethically. Dị ka m gwara gị na mbụ, a na-emepe ha n'okpuru ikikere ọhaneze. Ọ pụtara na onye ọ bụla nwere ike itinye akara nke koodu ya, weghachite ma bulite ya na ntaneti ịntanetị n'efu.
Ndabere nke nbudata ya na iwu na-akwadoghị bụ na ha nwere otu koodu nwere ike ịdebe n'ụzọ dị mfe ma nwee ike ịbanye weebụsaịtị gị ngwa ngwa n'oge ọzọ. Mbanye anataghị ikike pụtara ịchọpụta koodu ederede nke onwe ha. Ha maara ụzọ ịgbawa koodu ahụ wee banye weebụsaịtị. Nke a ghọrọ ihe mmechuihu nye gị. Anyị onwe anyị na-atụ aro ka ị budata ngwa mgbakwunye n'aka onye ọrụ gọọmentị Ebe nchekwa WordPress.
Na mkpokọta, WordPressfọdụ WordPress plugins na-efu gị ego, e nwere ọtụtụ puku plugins na WordPress repository. You nwere ike ịchọta ụzọ ọzọ ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ efu gị, ọ pụtaghị na onye nrụpụta mgbakwunye ọzọ na-eme ya. Karịsịa, plugins na-efu gị ego kwa ọnwa, kwa afọ otu oge, ma ọ bụ na ndabere ugboro ugboro, ya kpam kpam na-adabere na gị chọrọ otú ị na-aga na ya.
Ego ole ka ị ga - enweta site na WordPress Blog?
Enwere m ike ịzụta ngalaba site na Godaddy na nọrọ na WIX?
Nke gara agaEgo ole ka ị ga - enweta site na WordPress Blog?
Ọzọ PostBest Web Hosting for Small Business- 7 Factors You Should Know
Enwere m ike ịmepụta mkpokọta weebụ na WordPress na-enweghị ngalaba?